Kuzvimiririra iOS 11 mu iPhone 6 uye iPhone 6s kune zvakawanda zvekuvandudza | IPhone nhau
Kuzvimiririra iOS 11 mu iPhone 6 uye iPhone 6s kune zvakawanda zvekuvandudza
Sezvenguva dzose, muActualidad iPhone iwe unotoziva kare kuti tanga tichikuedza iOS 11 kwauri kwenguva yakareba, muchokwadi tanga tichishandisa GM yeIOS 12 kubvira yekupedzisira gumi nembiri, ingangodaro yakafanana vhezheni kune iyo iyo vashandisi vari kunakidzwa nhasi. iOS iyo yasarudza kugadzirisa. Zvisinei, tTine nhau dzakaipa kune varidzi vefoni dzakamira-refu senge iyo iPhone 6s kana iPhone 6, zvinova kuti kuita kwebhatiri kwakashata izvozvi.
Sezviri pachena Apple yakagumisa kuparadza basa rakanaka reBeta 7 ne8 yeIOS 11 uye kwayo yakanaka bhatiri kunwa, uye inopedzisa kuchengetedza kusashanda zvakanaka maererano nebhatiri ratakapiwa neIOS 11 GM.
Isu tinoreva neizvi kwete kugadzirisa kune iOS 11 kana uine iPhone 6 kana iPhone 6s? Kwete chaizvo, kuita kwebhatiri kwakaipa, sei kutinyengera, tinotarisira kuti uchawana "kushandiswa" kwe4h 30m. Asi kunze kwekunge iwe uchinge uchishandiswa zvakanyanyisa, unofanirwa kusvika (kunyangwe kudedera) masikati, pakati pa18: 00 pm na19: 00 pm Asi kana uri kuronga kutora rwendo rurefu kana kupedza maawa akawanda usiri pamba, zvinhu zvinobva zvaoma, zvirinani mune yedu ruzivo yakabatana neWiFi uye neApple Watch seshamwari yakatendeka.
Usavhunduka, mafomu mazhinji arikutoburitsa yavo yekuvandudza yeIOS 11 yakadai saSpark, Instagram uye kunyangwe Facebook, izvi zvinoreva kuti vamwe vakaita seWhatsApp neYouTube vane iOS 11 vakazvibata sebhureji chairo rebhatiri, vangangodaro vavandudze mashandiro aro uye kugona pamusoro pemavhiki, saka kurasikirwa kwekuzvitonga kunogona kuve kwakanyanya nekuda kwekushandisa kwakagadzirwa nevanhu vechitatu vasati vagadziridzwa, semuenzaniso, WhatsApp inogadzira akati wandei majekiseni mumifananidzo. Saka usarase tariro, kuzvitonga kunogona kuvandudza vhiki rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kuzvimiririra iOS 11 mu iPhone 6 uye iPhone 6s kune zvakawanda zvekuvandudza
Girazi Rinokudza akadaro
Zvinondidya zvakafanana. Iphone 6.
Pindura El Lupas
Buffff… .. iPhone 6S Plus… nhare nhatu dzisingasviki maminitsi maviri, kushandiswa kushoma kweWhatsApp uye zvimwewo uye na3: 16 inongova ne30% bhatiri rasara…. Zvakaipa tinoenda ...
Remmy Mejia akadaro
Haisi chokwadi ... ndine iyo iPhone 6s Plus ... ndakaivandudza nezuro nenguva dza5: 45 masikati (nguva yeColombia) uye yaive 100% yakabhadhariswa kuti yakabatana neMac (ini ndakagadzirisa kubva iTunes) uye panguva ino, ini handisati ndazviisa kuti zviremerwe zvakadaro uye iine 32% (Ndi 9:54 mangwanani), ndiko kuti, yanga ichishanda kwemaawa gumi nematanhatu.
Yakave yakabatana neinternet iyo nguva yese uye kunyangwe ini ndisina kuishandisa pandakanga ndivete, zvinoita kunge zvisiri zvakaipa kwandiri. Ndine chokwadi chekuti inotevera inogadziridza ichashanda zvakanyanya kuzvitonga.
Pindura Remmy Mejía
Ndine urombo ... hazvizove zvechokwadi kwauri ...
Ndiri kutaura pamusoro peimwe yangu chaiyo.
Iphone 6, haina kungodyiwa rinenge rese bhatiri rayo mumaawa asingasviki masere (panguva ye8 yakanga isinga shandiswe) asi ini ndakatumidzwa zita, iyo keyboard haiite. Zvinotyisa.
Iphone 7 plus mune akati wandei ine kukanganisa kumwe chete, bhatiri riri kudhonza zvakanyanya, uye ini handina kushandisa chero beta vhezheni
Alexander montero akadaro
Mune yangu nyaya ini handinzwe kuti bhatiri rinopera nekukurumidza, ko kana richinditadza ndipo paunenge uchinyora mune yemutambo chat, inosara kana ichiisa mavara pandinenge ndichinyora. Ndiyo imwe, imwe yacho: internet inovhurika chete pakombuta yangu, handina kumboisiya ichishandiswa pandinoenda kunorara. Nezuro husiku ndakazvimisa, pakarepo ndakakanganwa kuisa alarm yangu, ini ndinobatidza michina uye ini ndaive neinternet. Ndakaita matanho mamwe chete, kudzima internet & kudzima komputa, kuibatidza & kuibatidza zvakare. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti chete nekuiisa mune yendege modhi, inomira kuzviita yega. Ndozvikanganiso zviviri zvandakawana mukombuta yangu kubvira pandakagadzirisa.
Pindura kuna Alejandro Montero
Yangu iphone 6 yakagadzirisa iyo ios 11 uye inononoka kuvhura chero application iri tibor
Kune avo vanowana bug, ivo vanofanirwa kuseta iyo foni, yakaoma reset uye ingangove yakanaka zvakare.
kwandiri kana kuvandudza kwakapa majee, kuisazve zvakaoma uye senge nyowani.
Juan B akadaro
Ndine yakarongedzwa Iphone 6 uye haina mashandiro kana matambudziko ebhatiri. Ini ndinofunga ine zvakawanda zvine chekuita nekusakara uye kubvarura izvo bhatiri rinofanirwa kunge riine kubva kune uyo akaritenga makore maviri apfuura, pamwe nemutoro wemarara uyo anove anoshanda system panguva imwechete iyoyo.
Pindura Juan B
Iphone 6s uye 64gb. Ini handina kuona chero shanduko hombe nebhatiri parizvino. Chinhu chinotyisa nezve ios 11 ndechekuti inononoka uye kuomarara iyo komputa ikozvino. Zvirongwa zvinotora masekondi kuvhura; Ini ndinonyora uye inoenda isina chinhu, kudzamara yaita kamwe kamwe. Iyo yekumhanyisa kumhanya kweiyo Kubata ID ine njodzi. Zvese zvinovharika. Zviratidzo hazvina chinhu kana uchiedza kuvhura maapp Ini ndaive nayo pamwe neyekushandisa yakashandiswa pa95%, saka ndakafunga kuyedza kudzima ese mafoto kuti ndione kana yakarerutswa. Hapana chakachinja. Iko kumhanya shanduko kubva gumi kusvika 10 kunotyisa. Ndiri kudzokera ku11 panguva ino.
Pindura kune wega
Kubva kuShit PINCHES BLOWJOBS KUBVA KWAZVAKAITWA ZVAKANYANYA KUNONOKA IZVI
Ndine itsva 6gb iPhone 33. IOS 11 inonzwa inotyisa, kunyorera kunotora nguva kuvhura kunyangwe WhatsApp inokundikana, ini ndinokurudzira kwete kuvandudza.